कस्की छोरी-बुहारी महिनावारी हुन्छन् समाजलाई के चासो ? - Nagarik Medi
२०७८ चैत्र १६, बुधबार मा प्रकाशित २ महिना अघि
तिहारमा म र दाइ छ बर्ष पछि भेट भएका थियौ । भाइटिकामा दिदी आउछिन भाईटिका लगाई दिउछिन, भनेर बिहानै नुहाएर सफा चट्ट बनेर नया नयाँ कपडा लागाएर खुसि हुँदै दिदिको लागि उपहार स्विटर , साडि र पस्मिना पट्याएर प्याक गरेर चट्ट बुट्टा भरेर दाजुभाइको सल्लाह अनुसार नयाँ नोट साटेर दिदिलाई दिने र तिहारको गितमा नाँच्ने बिगतका तिहारका बारेमा समीक्षा गर्ने सल्लाह थियो ।
मैले आफेैले उनेको मखमलि माला र दाईले उनेको सयपत्रिको माला थियो । सबैजना भएर नाचँगान गर्ने योजना थियो १२ बजेको साईत मा टीका लगाउनु पर्ने दिदी आउनु भएन । तर, फोन आयो मैले टाका लगाउनु हुदैन । म महिनावारी भएकी छु, मेरो भाग्य नै खोटो छ ।
६ बर्षमा भाई टीका थाप्न आउदा पनि मेरो भाईको निधार खालि भयो । म बोल्नै सक्दिन भन्दै, भकानिए रुन थाल्नु भयो । फोन कट्यो, हामीले कल गर्यौ स्विज अफ भन्यो । हामी दिन भर न दिदी आउछिन् कि भनेर आशा गर्यौ तर आउनुभएन ।
कयौं बर्ष पछि भेट हुदा पनि टिला लगाउन पाईएना, भेटेै नहुदा कुनै गुनासो थिएन तर भेट भए पछि भने झनै नमाज्जा लाग्यो दिदिलाई दुई शब्द भन्न मन लाग्या थियो। तर दिदी को भन्दा पनि यो समाजले सिकाएको परम्परा हो समाजले राखेको बाउन्ड्रि हो ।
मलाई समाजका अगुवाहरुलाई भन्न मन छ महिनाबार अर्तथात मिन्स यो एक सामान्य सर्कल हो र यो व्यक्तिगत कुरा पनि हो कस्को छोरी मैनावरी भईन कस्कि छोरी मैना वारि भइनन् यो समाजको चाँसोको बिषय किन हुन्छ ? मलाई तिहारमा दिदी बहिनिको हातको टीका मुख्य बिषय हो दिदी तिमी ‘मिन्स’ भयौ भनेर मैले सोध्ने मेरो कुनै नैतिकता छैन ।
चाडबाड, बिहेको कार्यक्रममा दिदी किन आउँदिनौं, समाजका कस्लाई के सरोकार तपाईं मिन्स हुनु र नहुनुमा कसेैलाई सोध्ने के अधिकार ? यो नितान्त प्राकृतिक, निजी र गोप्य कुरा पनि हो । तर यहाँ कोहि भोको छ, नाङ्गो छ उस्को मतलब छैन, कोहि सिटामोल खाना नपाएर छट्पटाएको छ, त्यो मतलब छैन ।
जीवनजल खान पाएका छैनन् । कोही पाठेघरको क्यानसर भएर बिना उपचार कति मरिरहन्छन् त्यसको मतलब छैन । सेनेटरी प्याडमा कर छ त्यस्मा नाफा चाहिन्छ, प्याड नपाएर थोत्रो कपडा प्रयोग गरेर संक्रमण हुदा मतलब छैन, तर कस्की छोरी कस्की बुहारी ‘मिन्स’ भइन् किन मतलब ? र किन भनिन्छ, पर वस्नु पर्छ उसले छुनु हुदैन हुन्नु कस्तो कुरिति हो ?
महिलाको प्रजनन योग्य र डिम्वा निष्काषन को एक प्रक्रिया हो। पुरुषको पनि सुक्रकिट निष्कासन हुन्छ। तर, पुरुषले न भन्छन न बार्छन् तर महिलाको बारेमा किन यस्तो तथ्य हिन कुरा मा छुनु हुदैना अछुत हुन्छ मन्दिर जानू हुन्न ,घाम देख्नु हुन्न भनेर दबाद दिने गरिन्छ। विज्ञानले मानिसको सम्पन्न अंग,तन्तु, सेल, रक्त, केसिका, रगतमा भएका सयौं जिबानुको स्थिति सहि गलत छुट्याउछ, मुटु, कलेजो, फोक्सो, किड्नी फेरेर बचाउने डाक्टर चाहि मिन्स हुनु सामान्य चक्र हो भन्नुहुन्छ।
जीवनजल खान पाएका छैनन् । कोही पाठेघरको क्यानसर भएर बिना उपचार कति मरिरहन्छन् त्यसको मतलब छैन । सेनेटरी प्याडमा कर छ त्यस्मा नाफा चाहिन्छ, प्याड नपाएर थोत्रो कपडा प्रयोग गरेर संक्रमण हुदा मतलब छैन, तर कस्की छोरी कस्की बुहारी ‘मिन्स’ भइन् किन मतलब ?
तर, हामो समाज अगुवा भनु वा ठेक्केदारहरु ‘फस्ट एड’को बारेमा नजान्ने हरू आफुलाई बैज्ञानिक ठान्छन, उनिहरू भन्दा कयौ गुणा अध्यान अनुसन्धान गरे झैं बिना एक तथ्य गलत भन्छन् । तिम्रो मिन्स तिमिमा सिमित राख्नुस् कसैलाई नसुनाउनुस् कुनै समाजका कुनै विद्वानले छुट्याउन सक्दैनन् भने उनीहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ ।
यो गलत हो भनेर फेेरी कोही आधुुनिकताका नाममा ‘मिन्स’ हुँदा केक काट्ने पनि यहि छन् । नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई बढाइ चढाई गर्नु पनि आवस्यक छैन। शरिरका बिकार वस्तु दिशा,पिसाप, पसिना, र्याल, सिगान, मैनावारी हुदा हुने रक्तश्राव सबै विकार वस्तु हुन् । यसलाई अनाआवश्यक तरिकाले बहस गर्नु पर्ने उत्सव मनाउनु पर्ने वा निरुत्साहित हुनुपर्ने कुनै उचित कारण छैन। कुनै पनि चेलिवेटी कुनै कार्यमा आफुले आफेैलाई बन्चित नगराउनुस्स। शसक्त भएर अगाडि बढ्नुमहिनावारी बरदान हो, अभिसाप हैन।
-लेखक सिन्धुपालचाेकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (अहेव) हुन् ।